Non-notenomina fonosana kitapo
Non-tenona fonosana kitapo dia harona vita amin'ny tsy mpanenona lamba, izay amin'ny ankapobeny ampiasaina amin'ny fonosana lahatsoratra na tanjona hafa. Izy io dia karazana lamba voatenona tsy izay niforona amin'ny alalan'ny mivantana mampiasa poti-polymer avo, fohy na filaments kofehy mba hamorona kofehy fiaramanidina mikoriana na mekanika netting.
Ny lanjan'ny tsy voatenona fonosana kitapo dia mitovy amin'ny an'i harona taratasy tsotra sy ny harona plastika, fa izany no tian'ny olon-drehetra noho ny practicability, aesthetics sy ny fiarovana ny tontolo iainana.
Koa satria ny famotsorana ny plastika mba fetra, harona plastika no niala tsikelikely ny fonosana miaraka amin'ny tsena sy tsy nanolo-tenona harona. Non-tenona kitapo azo ampiasaina imbetsaka tsy izany ihany, fa koa pirinty ny lamina sy ny dokam-barotra. Izany dia azo ampiasaina amin'ny vidiny ambany dia ambany ny tahan'ny, izay tsy vitan'ny hoe mamonjy vola, fa koa ny dokam-barotra mitondra soa.
Nentim-paharazana fiantsenana kitapo dia fahazavana, ary mamonjy costs.In marefo mba hanaovany azy mafy orina kokoa, dia vola be. Non-tenona fiantsenana kitapo afaka mamaha izany olana mikasika ny Fahasarotana tsara fa tsy mora ho dikaina. Ankoatra ny ny hamafy, dia manana ny toetra mampiavaka ihany koa ny tantera-drano, tanana tsara tarehy fahatsapana sy ny tsara. Na dia avo ny vidin'ny, ny fanompoana ny fiainana dia somary ela.
Ny tsara tarehy tsy voatenona kitapo intsony ny entam-barotra fotsiny. Ny fijery mahafinaritra azo ho tiana, ary koa mba mampiova ny endriny ho lamaody sy tsotra soroka kitapo, izay lasa toerana manodidina tsara tarehy. Ny toetra mampiavaka ny hentitra, rano fanoherana sy ny tanana-mifikitra ihany koa ny safidy voalohany ho an'ny mpanjifa. Ankoatra izany, famantarana na ny dokam-barotra dia azo natao pirinty tamin'ny tsy tenona kitapo mba hamorona ny dokambarotra vokany.
Mba hamahana ny olana ara-tontolo iainana, ny plastika mba fetra, tsy nisy namoaka. Miverimberina ao ny tsy voatenona kitapo efa nihena be ny fanerena ny fako fiovam-po, ka dia mety ho sarobidy dia tsy nosoloina vola, ary afaka hamaha ny olana fa ny olon-tsotra fonosana tsy mora simba.
Tontolo iainana ao amin'ny mazava, ny maha samy hafa ny sakan'ny lamba tsara tsy ho tena lehibe. Fa ny mahantra dia hiseho lamba tena uneven sy ny mihasimba ny lamba kosa dia ho lehibe kokoa. Izany dia mampihena ny enta-mavesatra indrindra mitondra fahafahana ny lamba. Mandritra izany fotoana izany, ny lamba amin'ny tanana mahantra mihevitra mahatonga ny olona hahatsapa fa tsy mafy malefaka.
Mba hampihenana ny vidiny, ny sasany fitaovana amboarina sy ny mifanaraka ohatry ny nanasitrana mpandraharaha no nampitombo ny akora, ka ny vokatra lamba tsy matanjaka amin'ny hery sy ny tensile sarotra sitrana. Izany mahatsapa toy ny lamba dia ho matevina sy stiffer, fa tsy malemy. Amin'ity tranga ity, ny entana-mitondra fahafahana mahantra, ary ny lo dia ho sarotra kokoa ny tontolo iainana fa tsy sariaka.
Bag mitondra fahafahana
Ny lanjan'ny mitondra ao an-kitapo dia manana betsaka ny azo atao amin'ny tensile hery, fihenjanan'ny resaoro, ary ny andalana Heba sy tsipika fitaovana ao an-kitapo. Dehibe no novana fitaovana tontolo iainana, mandany ny tsipika 402 kofehy landihazo madio, ary ny andalana fotsiny Heba dia araka ny halavirana ny iray mirefy sy dimy fanjaitra, mba hiantohana ny mitondra mavesatra ao an-kitapo.
Raha ny fanontam-pirinty lamba dia tsy fialam-boly mafy tao, raha dia nendahina hanisy, raha ny tanjaky ny fanontam-pirinty mpiasa tsy fikikisana na dia ranomainty, ny mahantra viscosity ny feta dia hitarika ho amin'ny mazava fanontam-pirinty vokany.
Post fotoana: Dec-06-2018
Adiresy: Ny rihana voalohany Tanwutun Village, Mishui Street, Gaomi City, Weifang City, Shandong Province
Fitsipiky ny tsy voatenona kitapo